यी आईफोन Xs र ओरेन्जको साथ XS MAX को मूल्य हो Androidsis
ईडर फेरेनो | | मोबाईलहरू, टेलिफोन अपरेटरहरू
एप्पलले भर्खरै प्रस्तुत गरेको नयाँ आईफोन यस हप्ताका मुख्य पात्रहरू हुन्। तीन नयाँ मोडेलहरूसँग जुन कपर्टिनो फर्मले आफ्नो टेलिफोनको दायरा नविकरण गर्न खोज्छ। फोनको डिजाईन र स्पेसिफिकेसन धेरै चर्चा र छलफल गरिएको छ, यद्यपि यो तीन नयाँ फोनको मूल्य हो जुन सब भन्दा बहस उत्पन्न गर्दछ।
एप्पलले आफ्नो आईफोन नवीकरण गरेको छ पूर्ण रूपमा यी तीन मोडेलहरूको साथ, Xs र Xs अधिकतम, XR को साथसाथै (धेरै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सस्तो आईफोनको रूपमा संदर्भित)। स्पेनमा यसको प्रक्षेपणको लागि, यी फोनहरू अब ओरेन्जको साथ आइपुग्छन्।
रुचि राख्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि, सुन्तलाले यी मोडेल दुबै निःशुल्क र सम्बन्धित शुल्कको साथ प्रस्तुत गर्दछ। त्यसो भए तपाईको संयोजन खोज्नको लागि तपाईको लागि सजिलो हुनेछ जुन तपाईले खोजिरहनु भएको उत्तम सूट गर्दछ। तपाईंले खोज्नु भएको विधिमा निर्भर रहँदा, मूल्यले तपाईंलाई अधिक क्षतिपूर्ति दिन सक्छ।
नि: शुल्क मूल्य (भ्याट समावेश) दर संग किस्त बिक्री मूल्य (VAT समावेश)
टर्मिनल मुफ्त प्रारम्भिक भुक्तानी शुल्क / महिना
आईफोन XS GB 64 जीबी 1.159 € 42,50 €
आईफोन XS GB 256 जीबी 1.329 € 48,95 €
आईफोन XS GB 512 जीबी 1.559 € 57,50 €
आईफोन XS MAX 64GB 1.259 € 46,50 €
आईफोन XS MAX 256GB 1.429 € 52,95 €
आईफोन XS MAX 512GB 1.659 € 61,75 €
एप्पल वाच S4 40mm 529 € 18,50 €
एप्पल वाच S4 44mm 559 € 19,75 €
एप्पल वाच NIKE S4 44mm 559 € 19,75 €
तालिकामा मूल्यहरू प्रेम परिवार कुल, प्रेम परिवार असीमित वा प्रेम असीमित दरहरूको हुन्। यद्यपि अन्य ओरेन्ज दरहरू प्रयोग गरेर यी नयाँ आईफोनहरू प्राप्त गर्न सम्भव छ। प्रारम्भिक भुक्तान दरको आधारमा फरक छ, तर तपाईं तिनीहरूलाई सबै अपरेटरको दरहरूको साथ मिलाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, नयाँ आईफोनहरू विशेष गरी सस्तो भएको खण्डमा देखिँदैन। सबै भन्दा सस्तोको एक नि: शुल्क मूल्य १,१1.159eयूरो छ, केहि प्रयोगकर्ता जुन धेरैले अधिक हेर्छन्। नयाँ एप्पल फोनको मूल्यको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ? यदि हामीले ग्यालक्सी नोट9वा P20 प्रो जस्ता दुई एन्ड्रोइड फ्ल्यागशिपहरूसँग तुलना ग compare्यौं भने, मूल्यहरू अझ बढी हुन्छ।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट9कोरियाई फर्मको अहिलेसम्मको उत्तम मोडल हो, यो स्पेनमा १०1088 यूरोमा बिक्रीमा गएको हो। जबकि Huawei P20 प्रो हाल यसको १२735 जीबी संस्करणमा 128 यूरोका लागि उपलब्ध छ। तिनीहरू खास मोडेलहरूमा कम खण्डहरू हुन् जुन समान भागमा सर्दछन्. तपाईं यी आईफोनको मूल्यहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
आजबाट यो मोडेलहरू ओरेन्जमा आरक्षित गर्न सम्भव छ, सेप्टेम्बर २१ मा यसको प्रक्षेपण सम्म।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » टेलिफोन अपरेटरहरू » सुन्तलाका साथ नयाँ आईफोनका यी मूल्यहरू हुन्